ZArchiver dia mpitantana rakitra matanjaka amin'ny Android | Androidsis
ZArchiver, mpitantana rakitra matanjaka izay mamela anao hanokatra karazana endrika rehetra
Ao amin'ny Android dia manana ES File Explorer toa ny mpikaroka rakitra quintessential izay manana interface tsara ary iray amin'ireo napetraka indrindra avy amin'ny Play Store hahafahana manokatra karazana rakitra rehetra. Saingy, indraindray, rehefa mila manokatra endrika fisie tsy fahita firy ianao dia mety mila manao izany ampitao amin'ny fampiharana hafa ity iraka ity toy ilay hitondrantsika amin'ity alatsinainy ity ary tsy iza izany fa i ZArchiver.
ZArchiver Tsy hisongadina amin'ny fananana interface tsara indrindra izy ary tsy manana Design Material, saingy ny mety ho azy dia mitoetra amin'ny fahafahany manokatra karazana rakitra rehetra toy ny ISO na TAR. Raha tsy manokatra endrika ny mpitantana ny rakitrao dia mety efa mametraka ZArchiver ianao, fampiharana izay hodinihinay etsy ambony kely.
1 Rindrambaiko ratsy tarehy nefa tena ilaina
2 Fepetra famoronana rakitra ZIP
Rindrambaiko ratsy tarehy nefa tena ilaina
Amin'ny fotoana apetrakao sy hanombohana ity fampiharana ity dia ho tsapanao fa tsy maninona izay karazana rakitra ezahinao hosokafana, satria hiasa tanteraka izy io, io no mampiavaka azy indrindra amin'ireo mpitantana na mpikaroka rakitra.
Ankoatr'izay, hatramin'ny fotoana voalohany, ny interface dia tsy ilay hasehonao ny namanao, tsotra be amin'ny fitantanana ireo rakitrao sy lahatahiry rehetra. Avy eo an-tampony dia azonao atao ny miditra amin'ny tahiry anatiny na ny karatra micro SD mihitsy. ZArchiver dia afaka mampiasa ny format fisie .zip sy .7z amin'ny fipihana lava eo amin'ny fisie misafidy ny safidy "Compress".
Ny safidy tsy maintsy ataonao mba hanindriana ireo rakitra dia ireo mahazatra anao amin'ny solosaina manomboka amin'ny tsindry mankany amin'ny ultra. Toy ny mitranga matetika amin'ireo safidy famoretana ireo dia azonao atao ny manampy teny miafina hanampiana ny filaminanao amin'ilay rakitra Zip noforoninao.
Fepetra famoronana rakitra ZIP
Iray amin'ireo fetran'ny fampiharana dia rehefa mamorona rakitra ZIP izy, satria voafetra ny safidy manana 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ ary tar. Na dia mihabe aza ny fahafaha-manao rehefa mijery na manova rakitra efa noforonina, manana lisitra be dia be amin'ny endrika hanokafana. Ny iray amin'ireo hatsarany dia ny ahafahany mizara rakitra toy ny 7z.0001, zip.011, sns.
ZArchiver manana kinova pro izay mamela anao hampiasa lohahevitra andro aman'alina, ary amin'ny ankapobeny dia a mpitantana rakitra tsara mahery ho an'ny Android. Izy io aza dia manolotra fanohanana marindrano ho an'ny fitaovana miaraka amina CPU mihoatra ny iray, afaka mifidy izay cores tianay hampiasaina hitahirizana rakitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » ZArchiver, mpitantana rakitra matanjaka izay mamela anao hanokatra karazana endrika rehetra
Diego LV dia hoy izy:
Raha ny marina, dia toa tsara tarehy kokoa noho ny ES File Explorer izy io, raha ny marina dia tsy nateliko velively ny interface an'io mpikaroka rakitra io.
Hanandrana aho, satria mampiasa IO File Explorer aho izao, miaraka amina interface mitovy aminy.
Valiny tamin'i Diego LV
Ary holazainao aminay hoe manao ahoana ny fihetseham-ponao. Miaraka amin'ny famolavolana fitaovana marobe dia hadinontsika fa ny zava-dehibe dia ny mety!
Piktures, mpijery sary tsara amin'ny fanamboarana tsara tarehy